Qabashada Smartphone-ka Ugu Fiican Baaskiilka GD134C
Taabasho tayo sare leh oo looxa lagu dhejiyo Mount YB03
Top-iibinta Ipad Headrest Mount YH02
Laptop-ka Laptop-ka badan ee la-hagaajin karo oo la jaan qaadi kara MacBook Pro / Air, Apple Laptop, 11-15.6 "Xusuus-qor iyo Tablet Desktop Meel-Keydinta Hawada oo leh Anti-Slip Silicone Pad GL054A
Kiciyey silikoon lidka lidka-silbashada iyo suufka silikoonka.
18 darajo Laptop istaaga daawashada sare waxay kor u qaadaa muuqaalka wanaagsan waxayna yareysaa culeyska indhahaaga iyo qoorta.
ISKU-DUUBNAANTA KHARASHKA LEH: Moutik desktop-ka ayaa istaaga oo ku habboon laptops kasta inta u dhexeysa 11- 15.6 ", sida Apple Macbook, Mackbook Air, Macbook Pro iyo in ka badan.
UJEEDDADA ERGONOMIC: Kordhinta laptop-ka miiska miiska wuxuu ku siinayaa xagal raaxo leh oo aad ku qortid iyo daawashada si aad u yareyso xanuunka qoorta iyo garabka.
JIRKA DHALANKA ALUMINUMKA JOOGTA AH: Kumbuyuutarka adag ee aluminiumku wuxuu bixiyaa xasillooni wanaagsan iyo silsiladaha ka hortagga-silsiladda ayaa si wax ku ool ah uga ilaalin doona laptop-kaaga waxyeellada.
KU QAADASHADA WADA-QAADASHADA: Naqshadda la-laaban karo iyo miisaanka fudud (qiyaastii 25oz) ayaa fududeynaya in miiskan laptop-ka ah uu istaago boorsadaada oo u geeyo xafiiska, baarka qaxwaha iyo meel kasta oo aad rabto inaad tagto Sidoo kale miiska laptop si loogu nasto sariirta ama fadhiga salootada.
SAVE SPACE: Muuqaalka maareynta fiilada ee dhabarka istaagaan istaagida ah ayaa u oggolaaneysa in si habsami leh loo abaabulo fiilada lacag bixinta oo muuqaalkeeda la laaban karo ay ka caawineyso keydinta boos si loo sameeyo jawi fudud oo nadiif ah iyadoo aan la isticmaalin.
Silikoon + Aluminium + daawaha
Qalab ku habboon
Universal taleefanka leh 5.8-10 ballaaran
53 * 40 * 29cm ， 24pcs / kartoon
3-7 maalmood kadib xaqiijinta dalabka iibka
- Fadlan tixraac cabirka. Khalad cabbir yar ayaa loo oggol yahay inta caadiga ah.
- Waxaa jiri kara kala duwanaansho yar oo midab ah sababtoo ah kormeeraha, kamaradda ama arrimo kale, fadlan tixraac sheyga jirka.
1 x Taleefanka Miiska Tabeelaha Miiska